Quick mitaingina ny Aprilia Tuono V4 R APRC - môtô Tour News - Motorcycle ... | Môtô Mandamina amin'ny fepetra arahana, sary, naoty, hevitra sy ny discusssions
Home → Aprilia → Quick mitaingina amin'ny Aprilia Tuono V4 R APRC - Môtô Tour News - Motorcycle ...
19 Jun 2015 | Author: Dima | Comments Off on Quick mitaingina ny Aprilia Tuono V4 R APRC – Môtô Tour News – Motorcycle…
Quick mitaingina amin'ny Aprilia Tuono V4 R APRC
Sunday, Jolay 15, 2012
Ao amin'ny Just Ride môtô Tours sy Rentals isika mitady foana môtô izay manana izany toetra sasany izay mahatonga azy ireo miavaka, na inona na inona na dia Retro, tsy nanan-kitafy, fanatanjahan-tena, tourer na Cruiser karazana. Aprilia dia marika iray izay nahasarika ny maso ny mampientam-po isan-karazany ny moto izay mitaingina madio epitomize fifaliana. Ao amin'ity lahatsoratra ity isika dia hitantara aminareo ny momba ny fanandramana ny Aprilia Tuono V4R APRC.
Azonao atao ny mamaky ara-teknika tanteraka famerenana any an-kafa izany mahagaga bisikileta. Voatanisa eto ambany ny sasany. Eto ihany no manome ny fahatsapana ny fomba mahatsapa ny Tuono, Nahoana no nifidy azy aho noho ny famoriam-bola sy izay afaka manantena raha mitaingina ny iray amin'ny iray amin'ireo nitarika mitaingina.
Ny bisikileta aho nandeha tsara fanahy dia nomen'ny Red Baron Motorcycles ary ny APRC dikan-tenin'ny Tuono V4R. Tamin'ny fanombohana ny valisoa avy hatrany ianao amin'ny tsara tarehy V4 Hierona avy ao amin'ny setroka. Tsy ampy ny manao mafy loha mitodika, fa amin'ny fankasitrahana fa tsy tsy fankasitrahana. Ny zavatra manaraka ianao rehefa tonga saina blip ny throttle no manaiky avy hatrany ny maotera dia sy vonona ny Apôk.
Ilay mitaingina-by-tariby throttle manao ho tena fahazavana sady mandimandina asa, ary ianao no tena mahafantatra ny nilaza 167 soavaly ao anaty maotera izay miandry ny ho afaka!
Manipy ny tongotro eo amin'ny bisikileta, ny voalohany dia fahatsapana no voalamina tsara ary tery dia. Fa ny V4 tsy mahatsapa izany bisikileta midadasika kokoa noho izany avy hatrany V-kambana nodimbiasany ny Tuono 1000R. Ny fihetseham-po dia voalamina tsara kokoa amin'ny fomba mazava ny bisikileta mahatsapa.
Rehefa avy tilting ny bisikileta lafiny LAFINY amin'ny standstill dia mora ny hifindra, mampiseho fa mitondra fa somary ambany ny lanjany teo amin'ny aluminium andry filanjana. Ny takatry ny kely nanangana tapered handlebars fotsiny aina fohy mahia lasa, ary ny footpegs tsy nametraka ho avo toy ny rearset ampy fitaovana sportsbike, mamela anao hanana tsy dia tery zoro amin'ny lohalika. Mbola eo amin'ny lafiny sporty, fa ampy ho tony omena mitaingina.
Fa ny hahavony (6’ na 1.82m,) ny footpeg ny tanky lavidavitra tanteraka, mamela ahy mba hanidy ny handohalika eo ambanin'ny sculpted cutouts mahery vaika ny fiara. Ny seza no mafy orina, ary somary fisaka mba tsy nariana nandroso nankany amin'ny tanky. Noho ny kely fironana handroso toerana, dia nitondra lanja bebe kokoa noho ny anaty fe izany aho milaza fa ny andro nitaingina ny twisities tsy mametraka olana.
Mamerina izany amin'ny voalohany fitaovana sy mandroso dia mivantana eny amin'ny hetsika ny mazava tariby niasa clutch. mahagaga, ny clutch fanoitra tsy span Adjustable, raha ny novakiny fanoitra dia. Raha mbola tsy nahita izany ny olana, dia zavatra iray aho dia diniho manova mba hahazoana antoka ny bisikileta azo mifanaraka tanteraka noho ny mpitaingina.
Ambling tsikelikely manodidina ny tanàna dia nampiseho fa tena azo ampiasaina ity dia bisikileta. Ny gearing dia mamantatra tamin'ny tany voalohany sy faharoa Gears ary afaka burble miaraka amin'ny kely kokoa noho ny ambony kamo tsy misy ny maotera nimenomenona. Ny ara-drariny ihany koa ny sakany handlebars namela anareo, mba hahatonga ny bisikileta amin'ny alalan'ny fifamoivoizana amin'ny mora. Noho izany, ny Tuono isa manodidina ny tanàna koa ny fitaterana.
Fa tsy ny zavatra rehetra momba izany, no? No, ity mitaingina bisikileta efa madio ny herisetra voasoratra manerana azy.
Manokatra ny throttle vatana avy hatrany pitifirana ny Tuono handroso. Izany Hierona avy ao amin'ny setroka miakatra amin'ny hamafin'ny feonao sy ny haavon'ny amin'ny rapidity, ary very saina ianao noho ny gearlever scrambling rehefa namely indray dia ho any amin'ny seza sculpted malefaka hump. Ny modely APRC dia iray naorina quickshifter ary izany no tena slick ao amin'ny fandidiana. Tsy misy hesitancy na very ny fiara dia afaka upshift ny lalana ho any an-tampon'ny.
Ary ny Tuono miasa ny singa ao anatiny dia azonao tsara ny ergonomics bebe kokoa. Ny kely izay zara raha nosefairing fitarainana avy amin'ny tsoavaly no toerana tena tsara tarehy asa tsara amin'ny fitandremana ny ratsy indrindra ny windblast lasa ary manome tsara ny fifandanjana ara-drariny tony marina mitaingina toerana. I Mora mahita ny tenako mitaingina bisikileta ity eo amin'ny mitaingina intsony.
Bisikileta ity dia manana biby goavam-be iray maotera. Ny APRC amin'ny vahana fanaraha-maso, manohitra ny fanaraha-maso wheelie, ABS, Quickshift maotera sy ny maro raha ny marina kokoa ny sarintany traikefa tsoavaly mamela anao hankafy ny fahefana maintsy mahatsapa ianao mitana eo ny tigra amin'ny rambony iny,. Ny tigra Mbola misy fa ny ankehitriny eo ambany fanaraha-maso tanteraka ny, famelana ianao mifantoka amin'ny fahazoana ny tsara indrindra avy tao an-bisikileta sy ny lalana mialoha.
Noho ny tonga Toggle mora ny mifamadika afaka Flick ny "S” na "R” fomba sy ny bisikileta fanatanjahan-tena lasa mandroso tourer, na ianao dia afaka mifidy "T” ka mandehana banzai ambony 7000 isa-minitra, Mbola miaraka amin'ny fanohanana ny fanoherana ny wheelie sy ny fanaraha-maso vahana. Tanteraka ary tena mampiankin-doha.
Flicking ny bisikileta avy amin'ny lafiny iray ho any amin'ny hafa dia efa ezaka. A kely hesitancy amin'ny tapaky ny fandehany fotoana ho fampiatoana izay tsy mbola nanangana, ary nampiseho fa tena fanamarihana azonao avy amin'ny Ohlins fampiatoana sy ny fitsipika fitment Pirelli Diablo Super Corsa kodiarana. Ny chassis no mamily rafitsary dia nanalefaka kely avy amin'ny Aprilia RSV4R sy miaraka amin'ny wheelbase intsony ny Tuono nahatsapa tena miovaova amin'ny hafainganam-pandeha.
Ny lehibe mitambatra ho an'ny lalana.
Tonga indray amin'ny Baron Mena ny tsena amin'ny lehibe grin nihohoka aho dia nanana fahafahana ny mieritreritra indray ny diany ary miezaka sy unscramble ny eritreritro avy eo an-tanako ity fanafihana saina! Mazava ho azy fa ny Tuono dia mihoatra noho ny iray hafa mitanjaka môtô. Izany dia mihoatra noho ny superbike tsy misy ny fairing sy mahitsy mitaingina toerana. Tsy mitady ny hanome ny mahay manavaka mpitaingina azy amin'ny izay matetika saro-takarina toetra ao amin'ny bisikileta. Complete fahafaham-po rehetra mitaingina.
Efa tratra ny Tuono fa? Azo antoka, raha toa ahy ianao rehefa afaka izany, efa ho symbiotic fifandraisana amin'ny môtô, te bisikileta azonao atao ny zavatra rehetra avy amin'ny lalana andro ho lava andro sy ny fanatanjahan-tena mitaingina eran'i Boligaria, ny Tuono tsy handiso fanantenana. Izy io dia tena mahafa-po sy mampientam-po môtô.
Noho ireo antony ireo ihany dia mahafeno fepetra ho toy ny bisikileta, izay an'ny miaraka amin'ny famoriam-bola ao amin'ny Just Ride môtô Tours. Afaka tokoa aho mahita ny Tuono ampiasaina eo amin'ny Stay sy Ride andro intsony Tours sy ny Weekender 2 4 andro nitarika mitaingina. Malefaka miaraka amin'ny entana (tsy mampaninona anao loatra) Aho dia afaka mahita izany nampiasaina tamin'ny omena ny sasany ny nitarika Tours.
Rehetra mahita ny fitsidihana avo twisty ohatry ny lalana dia hisy fahafahana maro ho an'ny Tuono tokony hovahana!
Manantena aho fa nahafinaritra anao io lahatsoratra io ny Aprilia Tuono RV4 R. Tandremo ny lahatsoratra sy ny vaovao hafa mampiseho ny môtô, mitaingina sy ny fitaovana ampiasaintsika. Afaka mifandray amintsika amin'ny alalan'ny rohy ara-tsosialy eo amin'ny tranonkala.
2007 Aprilia Scarabeo 50/100 môtô famerenana @ Top Speed
Royal Enfield Bullet 500 Classic Suzuki Colleda CO Aprilia Mana 850 Honda DN-01 môtô Honda Dream Kids Dokitto Honda Goldwing M1 nitranga fahiny Honda X4 Low Down Suzuki B-nitranga fahiny Final Mpanjaka Indian Chief Classic Ducati 60 Suzuki B King Concept Bajaj Discover Bike Kawasaki Four Square Ducati Diavel Bike Kawasaki er-6n KTM 125 Foko Concept Smart eScooter Honda DN-01 Automatic Sports Cruiser Concept MV Agusta 1100 Grand Prix Ao amin'ny môtô Honda Harley Davidson XR- 1200 Concept Ducati Desmosedici GP11 Brammo Enertia Suzuki AN 650 Moto Guzzi 1000 Daytona tsindrona